Maandooriye Hawada La Wareejin Karo, Mashiinka Sifaynta Hawada - FAUCI
Tijaabada Cusbooneysiinta Cuntada
Ku rid roodhida cusub ee la dubay laba dhalo oo kala duwan oo kala duwan, mid leh FAUCI AAPG Material, kan kalena ha dhigin. Ku dar biyo labada dhalo si aad uga hortagto in cuntadu qallasho. 7 maalmood ka dib, rootiga ku jira weelka dhalada leh Fauci AAPG Material ayaa u muuqda inuu yahay mid hagaagsan halka roodhkii galaaska ku jiray oo aan lahayn FAUCI AAPG Waxyaabaha ay ku hareeraysan yihiin bakteeriya iyo caaryaal aad u badan, oo ah tilmaan cad oo ah FAUCI AAPG Waxyaabaha dila bakteeriyada iyo wasakhaha weelka dhalada ah.
Waxyaabaha FAUCI AAPG waxaa la geliyaa haan biyo leh oo leh kalluun yar. 27 maalmood ka dib, kalluunkii yaraa weli wuu nool yahay, isagoo soo jeedinaya in FAUCI AAPG Agabku uusan dhib u lahayn kalluunka yar.
Bannaanbaxa Robot -ka Faafiyey ee FAUCI
Robot -ka Faafiye Hawada ee FAUCI ayaa soo bandhigaya bur -burinta xaaqidda iyo hawsha jeermiska hawada ee jawiga nolosha dhabta ah. Waa mashiin aad waxtar ugu leh soo kabashada ganacsiga kadib COVID-19.
Shanghai Fauci Technology Co., Ltd waa shirkad hal -abuur leh oo hadafkeedu yahay horumarinta iyo bixinta alaabada jeermis -diidka, is -daahirinta iyo sifeynta si ay u daboosho baahida sii kordheysa ee hawo tayo sare leh oo ay leeyihiin macaamiisha adduunka.